Home Wararka Cudurka Covid19 oo la sheegay in uu aad ugu faafayo dalka Soomaaliya
Cudurka Covid19 oo la sheegay in uu aad ugu faafayo dalka Soomaaliya
Wasaaradda Caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in kiisaskii ugu dambeeyay ee cudurka Karoonaha. Wasaaradda ayaa sheegtay in gobolka Banaadir kiisaska cudurka Karoonaha ay sare u kaceen Saacaddihii lasoo dhaafay.
Tirada 24 saac ee ugu dambaysay laga baaray COVID-19 guud ahaan wadanka laga baaray dad gaaray 1,158. Guud ahaan waxaa dalka laga helay 43 ruux iyadoo 29 ka mid ah ay laga helay Muqdisho,Puntland 8,Somaliland 4 halka Jubbaland laga helay 1 ruux.
Maadaama sare u kac uu ku yimid dadka laga helayo cudurkan caasimada dalka ayaa waxaa ay wasaarada caafimaadka sheegtay in Isbitaalka Martiini ayaa mar kale dib u bilaabayo wax ka qabashada cudurkan COVID-19, Iyadoo gabi ahaanba la joojiyay Adeegyadii kale ee Isbitaalku u hayay Bulshada.